Phumula, uvuselele futhi ukhiphe amapulagi ku-Birdbox Tokke - I-Airbnb
Phumula, uvuselele futhi ukhiphe amapulagi ku-Birdbox Tokke
Tokke, Vestfold og Telemark, i-Norway
Indlu encane ibungazwe ngu-Lill
U-Lill Ungumbungazi ovelele
Phumula, uvuselele futhi ukhulule kule Bhokisi lezinyoni e-Tokke, e-Telemark. Zizwe useduze nemvelo unethezeke kakhulu. Jabulela ukubuka ichibi ehlathini lasendle elizungeze i-Aamlivann. Yizwa ukuzola kwangempela kwasemaphandleni ase-Norway kwezinyoni eziphithizelayo, izilwane zasendle, nezihlahla emoyeni. Hlola indawo yasemaphandleni, thatha uhambo oluya e-Dalen bese ubona i-fairytalehotell noma uthathe uhambo nomkhumbi wezilwane e-Telemarkskanalen. Qwala izintaba ezizungezile, uphumule ngencwadi enhle, noma ngaphandle nomlilo wokukhempa.
Kungakhathaliseki ukuthi ungumthandi wemvelo, umthwebuli wezithombe wemvelo, noma njengokungathi uchitha isikhathi sekhwalithi ngaphandle kuma-scenerys amahle, i-Nyonibox e-Tokke inhle kakhulu. Izilwane zasendle zasendaweni zicebile kakhulu, futhi imvelo ezungezile ifana nosaziwayo.
Kukhona iyunithi ehlukile yendlu yangasese, lapho ingaphambili ingilazi enkulu, ukuze ukwazi ukujabulela indawo ngaphandle kokubuka indawo.
Sinesikebhe izivakashi zethu ezingasisebenzisa, kanye nendawo yomlilo yokupheka ukudla.
Izaphulelo zobusuku obungaphezu kobunye.
4.82 · 156 okushiwo abanye
Jabulela indawo ezungezile, ngokwesibonelo Řmdals Verk, enomlando ocebile wemvelo, kuyilapho ungathola izimayini eduze. Uma usendaweni, situsa kakhulu ukuvakashela ihhotela lase-Dalen "ghost" kusuka ngo-1894, noma uhambo oluya e-sauna enhle i-Soria Moria. I-sauna inga-oda kuwebhusayithi yesigodi sokuvakasha. Ungase ufune ukubhukha ngesikhathi esihle ngaphambi kokuba ufike njengoba kunabaningi abasebenzisa lokhu ngokunenzuzo. Jabulela isiko nomlando ngohambo oluya emnyuziyamu ye-West Telemark, khona nje nge-Eidsbord Stave Church enhle. Le ndawo ingaphinde ilingane nokuqwala izintaba okumangalisayo okufana ne-Lårdalstigen ne-ravnejuvet. Situsa ukuthi uhlole iwebhusayithi ye-telemark. Ehlobo kunamathuba amahle okubhukuda anamabhishi amahle angu-2 nje ohambo lwesikebhe oluya e- Řmdal 's verk. Ebusika kunamathafa amahle okushushuluza eqhweni nama-ski lift endaweni.
ULill Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Tokke namaphethelo